Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri Vanobhadhariswa Mari yeChibatiso
Dare repamusoro nhasi rapa mumiriri weHarare West muparamende, Muzvare Joanna Mamombe, pamwe nemutevedzeri wasachigaro wevechiki muMDC Alliance, Muzvare Cecelia Chimbiri, mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa pamwe nekutyora mirawu yechirwere chedzihwamupengo kana kuti Covid-19 Regulations.
Mutongi wedare, VaWebster Chinamhora, vati vaviri ava vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso.
Vatiwo zvakaturwa naVaMambanje kuti vane hudokwdokwa hwekupara mhosva hazvina musoro sezvo vasungwa ava vasati vabatwa nenyaya kana imwechete zvayo pamhosva dzose dzavari kupomerwa dziri mumatare.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatswayo, vati vafara nemutongo waturwa nedare vachiti zviri pachena kuti vaviri ava vangadai vasina kumbosungwa kubva pekutanga.
Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vanoti vakasungwa vari kwachiremba wavo kwavairapwa zvichitevera kutochwa kwavanoti vakaitwa zvichitevera kupambwa kwavanoti vakaitwa vari mumaoko ehurumende gore rapera.
Zvichakadai, komiti yepamusoro yesangano reZimbabwe Miners Federation nhasi yaita musangano muHarare payabvumirana kudzosera Muzvare Henrietta Rushwaya semutungamiri wesangano iri.
Imwe nhengo yekomiti iyi, VaDaniel Chitenje, vaudza Studio 7 parunhare kuti vatora danho iri sezvo Muzvare Rushwaya vakaburitswa mujeri vachiti sangano ravo raona kuti kumbovamisa basa kwavakaita kwakaitwa pasingatevedzerwi bumbiro remitemo resangano iri.
Muzvare Rushwaya vakanga vamiswa basa semutungamiri wesangano iri zvichitevera kusungwa kwavakaitwa gore rapera pavakabatwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matanhatu zvisiri pamutemo zvakazokonzera kusungwa kwevamwe vanhu vana vanosangansira vasori vaviri.
Muzvare Rushwaya vakabuda mujeri mwedzi wapera mushure mekupihwa kwavakazoitwa mukana wekubhadhra mari yechibatiso nedare ramejasitiriti uyo wavakambenge vanyimwa nedare iri.